Taageerayaasha Arsenal oo aad u faraxsan kaddib Wenger oo lagu arkay Faransiiska – Gool FM
Taageerayaasha Arsenal oo aad u faraxsan kaddib Wenger oo lagu arkay Faransiiska
(Paris) 31 Agoosto 2017. Taageerayaasha Arsenal ayaa aad u faraxsan kaddib markii tababarahooda Arsene Wenger lagu arkay magaalada Paris ee dalka Faransiiska iyagoo iska dhaa dhiciyay inuu soo dhammeynayo saxiixa Thomas Lemar.
Gunners ayaa waysay xiddigeeda Oxlade-Chamberlain kaa oo 40 milyan ugu biiray Liverpool waxayna suuqa ugu jiraan si xoogan sidii ay u heli lahaayeen badelkiisa.
Madaxda Gunners ayaa saakay la wariyay inay wada hadalo la fureen kooxda PSG arrinka ku aadan Julian Draxler.
Laakiin Wenger uma muuqdo inuu sidaa darteed u joogo Faransiiska oo Draxler maba joogo Paris oo wuxuu ku maqan yahay xulka qarankiisa Jarmalka.
Taa oo la micno ah inay suuro gal tahay inuu meesha u joogo Tomas Lemar ee u safta Monaco isla markaana qeyb ka ah xulka Faransiiska ee caawa wajahay Netherlands isreeb reebka koobka adduunka.
Laakiin Wenger ayaa la arkaa in sida dhabta ah uu halkaa u joogo inuu falan qeeyo kulanka Holland iyo Faransiiska maadaama uu badanaa halkaa u tago howlahaas uu u qabto Taleefishin laga leeyahay dalkaasi Faransiiska.
Alexis Sanchez oo saaxiibadiisa xulka Chile u sheegay inuu ku biirayo Man City
RASMI: Yann Karamoh oo ku biiray kooxda Inter Milan + Sawirro